जनैको तीन सूत्र, नौ तार र पाँच गाँठोको बैज्ञानिक महत्व के छ ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
धेरैले देखेका हुनसक्छौं कुनैपनि संस्कारयुक्त तागाधारीहरुले आफ्नो बाँया काँधदेखि दायाँ कम्मरसम्म पुग्नेगरी एक कच्चा धागोलाई बेरेर राखेको हुन्छ । त्यही धागो शौच गर्न जाने बेलामा दायाँ कानेमा बेरेर गएको हुन्छ । त्यही धागोलाई हामी जनै भन्दछौं । यो जनैमा तीन वटा सूत्र, नौ वटा तार र पाँचवटा गाँठाहरु रहेका हुन्छन् । यही जनैलाई संस्कृतमा यज्ञपवित भनिन्छ र पहिलो पटक यज्ञपवित गर्ने दिनलाई सोह्र संस्कार मध्येको एक दिन पनि मान्ने गरिएको छ । यो जनै सूतबाट बनेको पवित्र धागो हो । जसलाई तागाधारीहरुले बायाँ काँधबाट सुरु गरेर दायाँ हातको मुनीसम्म पुग्नेगरी पहिरिने गरिन्छ ।
धर्मजनैको तीन सूत्र, नौ तार र पाँच गाँठोको बैज्ञानिक महत्व के छ ?
विश्वकै ठूलो भ्यागुता जसले आफै बनाउँछ वासस्थान
बुधबारका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक फेरि स्थगित
काठमाडौँ । सीता र रामको पूजा गरी मनाइँदै आज विवाह पञ्चमी वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने...